Trending No.1 ဖြစ်နေတဲ့ Rapper XXXTentacion ရဲ့ 'SAD!' သီချင်းဗီဒီယို
YouTube မှာ Trending No.1 ဖြစ်နေတဲ့ Rapper XXXTentacion ရဲ့ ‘SAD!’ သီချင်းဗီဒီယို
29 Jun 2018 . 12:10 PM
Rapper XXXTentacion တစ်ယောက် သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခံခဲ့ရပြီး ၁၀ ရက်အကြာမှာ သူ့ရဲ့ ‘SAD!’ Music Video က ထွက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ ဒီ ဗီဒီယိုကို ကြာသပတေးနေ့ မနက်က စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး ထွက်ရှိပြီး ၁၆နာရီအတွင်းမှာ ကြည့်ရှုမှု ၂၄ သန်းကျော်နဲ့ YouTube မှာ Trending No.1 ဖြစ်နေပါတယ်။
XXXTentaction ရဲ့ ‘SAD!’ သီချင်းဟာ သူ့ရဲ့သေဆုံးမှုကို အကြောင်းပြုပြီး စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာတဲ့အတွက် Billboard Hot 100 မှာ နံပါတ် ၅၂ နေရာကနေ နံပါတ် ၁ နေရာကို ချက်ချင်းရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
Video ကို ရိုက်ပြထားပုံကလည်း လုံးဝအလွင့်ကြီးဖြစ်ပြီး XXXTentacion ဟာ သူ့ရဲ့ဈာပနကို တက်ရောက်လာပုံနဲ့ စဖွင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အခေါင်းထဲက သူ့ရုပ်အလောင်းကို ကြည့်နေစဉ်မှာပဲ သူ့ရဲ့ ရုပ်အလောင်းက နိုးထလာပြီး သူနဲ့ ပြန်လည်သတ်ပုတ်ကြတာကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။ ဒီဘဲ မြန်မာလူမျိုးသာ ဖြစ်လို့ကတော့ နမိတ်တွေ ပြနေတာလို့ ဝိုင်းပြောကြနိုင်ပါတယ်။
ဒီ Music Video ဟာ XXXTentacion အတွက် အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနားကို ဖလော်ရီဒါမှာ ပြုလုပ်ပြီး နောက်တစ်ရက်မှာ ထွက်ရှိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ New York Times ရဲ့ သတင်းအရတော့ XXXTentacion ရဲ့ အခေါင်းကို ဖွင့်ထားပြီး လာရောက်နှုတ်ဆက်ကြတဲ့အခါမှာ XXXTentacion ကို အနက်ရောင်အခေါင်းထဲမှာ အပြာရောင်ဂျင်းဂျက်ကက်ကို ဆင်ယင်ပေးထားပါတယ်။
XXXTentacion’s Memorial Service
XXXTentacion ရဲ့အမှုအတွက် နောက်ဆုံးသတင်းကတော့ Dedrick D.Williams ဆိုတဲ့သူကို ဖမ်းဆီးပြီး လူသတ်မှုနဲ့ တရားစွဲဆိုထားခဲ့သလို တခြားလူတစ်ယောက်ကိုလည်း သံသယရှိမှုနဲ့ စွဲဆိုထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
YouTube မှာ Trending No.1 ဖွဈနတေဲ့ Rapper XXXTentacion ရဲ့ ‘SAD!’ သီခငျြးဗီဒီယို
Rapper XXXTentacion တဈယောကျ သနေတျနဲ့ ပဈသတျခံခဲ့ရပွီး ၁၀ ရကျအကွာမှာ သူ့ရဲ့ ‘SAD!’ Music Video က ထှကျရှိလာခဲ့ပါပွီ။ ဒီ ဗီဒီယိုကို ကွာသပတေးနေ့ မနကျက စတငျထုတျလှငျ့ခဲ့ပွီး ထှကျရှိပွီး ၁၆နာရီအတှငျးမှာ ကွညျ့ရှုမှု ၂၄ သနျးကြျောနဲ့ YouTube မှာ Trending No.1 ဖွဈနပေါတယျ။
XXXTentaction ရဲ့ ‘SAD!’ သီခငျြးဟာ သူ့ရဲ့သဆေုံးမှုကို အကွောငျးပွုပွီး စိတျဝငျစားမှုမွငျ့တကျလာတဲ့အတှကျ Billboard Hot 100 မှာ နံပါတျ ၅၂ နရောကနေ နံပါတျ ၁ နရောကို ခကျြခငျြးရောကျရှိလာခဲ့ပါတယျ။
Video ကို ရိုကျပွထားပုံကလညျး လုံးဝအလှငျ့ကွီးဖွဈပွီး XXXTentacion ဟာ သူ့ရဲ့ဈာပနကို တကျရောကျလာပုံနဲ့ စဖှငျ့ပါတယျ။ ပွီးတော့ အခေါငျးထဲက သူ့ရုပျအလောငျးကို ကွညျ့နစေဉျမှာပဲ သူ့ရဲ့ ရုပျအလောငျးက နိုးထလာပွီး သူနဲ့ ပွနျလညျသတျပုတျကွတာကို ရိုကျကူးထားတာပါ။ ဒီဘဲ မွနျမာလူမြိုးသာ ဖွဈလို့ကတော့ နမိတျတှေ ပွနတောလို့ ဝိုငျးပွောကွနိုငျပါတယျ။
ဒီ Music Video ဟာ XXXTentacion အတှကျ အောကျမဖှေ့ယျအခမျးအနားကို ဖလျောရီဒါမှာ ပွုလုပျပွီး နောကျတဈရကျမှာ ထှကျရှိလာတာ ဖွဈပါတယျ။ New York Times ရဲ့ သတငျးအရတော့ XXXTentacion ရဲ့ အခေါငျးကို ဖှငျ့ထားပွီး လာရောကျနှုတျဆကျကွတဲ့အခါမှာ XXXTentacion ကို အနကျရောငျအခေါငျးထဲမှာ အပွာရောငျဂငျြးဂကျြကကျကို ဆငျယငျပေးထားပါတယျ။
XXXTentacion ရဲ့အမှုအတှကျ နောကျဆုံးသတငျးကတော့ Dedrick D.Williams ဆိုတဲ့သူကို ဖမျးဆီးပွီး လူသတျမှုနဲ့ တရားစှဲဆိုထားခဲ့သလို တခွားလူတဈယောကျကိုလညျး သံသယရှိမှုနဲ့ စှဲဆိုထားပွီး ဖွဈပါတယျ။